Tusaha Ardayga | Sapsa
Xiriiriyahaaga iskuulka bulshadayada
Fadlan RIIX HALKAN si aad u buuxiso foomka Google ee loogu daro galka.
Tusaha Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park (oo loo yaqaan "Buzzbook") waa ilaha ugu muhiimsan ee macluumaadka xiriirka ardayga iyo macallinka. Waxaa ku jira liisaska fasalka iyo shaqaalaha, iyo sidoo kale SAPSA, Golaha La-talinta iyo macluumaadka xiriirka degmada.
Qoys kastaa wuxuu heli doonaa nuqul. Lagaagama baahna inaad soo gudbiso macluumaadkaaga xiriirka buugga, laakiin waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sidaas sameyso! Waxaad ku dari kartaa macluumaad aad u badan ama yar sidaad dooratay. Waa hab fiican oo ay caruurtu ugu xiriiraan asxaabtooda fasalka iyo asxaabta iyo qoysaska inay is gaadhaan.
Macluumaadkaaga waligiis lama wadaagi doono ama looma iibin doono dhinacyada 3aad. Waxaa lagu dari doonaa galka oo waxaa loo isticmaali doonaa isgaarsiinta SAPSA mararka qaarkood.
Haddii aadan ku qanacsaneyn inaad ku buuxiso macluumaadkan foomamka Google, fadlan ku soo gudbi macluumaadka qoyskaaga emayl. Waxaad sidoo kale ku toosin kartaa wixii su'aalo ah Bet Kary at Directory@sapsamn.org Haddii kale, fadlan RIIX HALKAN si aad u buuxiso foomka Google.